Madheshvani : The voice of Madhesh - ओलीलाई आँट छ भने सरकारबाट निकालोस् : रेणु यादव
ओलीलाई आँट छ भने सरकारबाट निकालोस् : रेणु यादव
उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
२०७६ साल कार्तिक २२ गते शुक्रबार
० समाजवादी पार्टीलाई सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने कति दबाब छ त ?
— सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म पार्टीमा छलफल भएको छैन । तर, हाम्रो मान्यता के हो भने विगतमा जुन मुद्दामा सरकारले हामीसँग सहमति गरेको थियो त्यसप्रति प्रधानमन्त्री, सरकार वा नेकपा नै गम्भीर देखिएको छैन । संविधानप्रति सबैको अपनत्व ग्रहण गराउने जुन दायित्व हुनुपर्ने थियो, सरकार त्यसमा उदासीन छ । यो बहुमतको सरकार हो । हामी सरकारमा रहँदा वा नरहँदा केही फरक पर्दैन । हामीले संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ पु¥याउनका लागि मात्रै सरकारमा गएका हौं । यदि सरकारले संविधान संशोधन नै गर्दैन भने हामी बसिरहनुको केही औचित्य हुँदैन । यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ ।
० त्यसो भए सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने मनोस्थितिमा समाजवादी पुगिसकेको छ ?
— यस विषयमा अहिले कुनै निर्णय भइसकेको छैन । समतामूलक देश निर्माण गर्ने कुरामा समाजवादी पार्टी गम्भीर छ ।
० तपाइँहरूले जुन सहमति गरेर सरकार जानुभएको थियो, त्यसप्रति त सरकार गम्भीर नदेखिएको तपाईँले नै भन्नुभयो । अझै पनि सरकारमा बसिरहनुको औचित्य छ र ?
— हामीलाई जनताले दिएको जनमतप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं । यो दायित्व हाम्रो मात्रै होइन, सबैको हो । संविधानभित्र सबैको अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसकारण, सरकारबाट बाहिरिनुभन्दा पनि सरकारलाई दबाब दिइरहनु पर्छ । हामीले जनतालाई अवगत गराउँछौं कि यो सरकार जनताप्रति गम्भीर छैन । जसरी यो सरकारलाई जनताले बहुमत दिएको छ, त्यसअनुसार के–के काम भएको छ । त्यो कुराहरू बोध गराउनका लागि हामी अब अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० तर, यो सरकारले त समाजवादीलाई खासै महत्व नै दिएको छैन नि ?
— कहिलेकाहीं नकारात्मक भावले होइन, सकारात्मक भएर पनि हेर्नुपर्छ । यो सरकारमा समाजवादी पार्टीले सरकारी गाडी र झण्डा हल्लाउनका बसेको छैन । हामी यत्रो दिन सरकारमा बस्दा पनि मधेशप्रति सरकारको चाहना र चरित्र के छ भन्ने कुराको अवगत जनतालाई हुन थाल्यो । हामी सरकारमा हुँदा उपेन्द्र यादवलाई सरकारले महत्व दियो कि दिएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । अहिले पनि मधेशमा कम्युनिष्टहरू खेलिरहेका छन् । मधेशका सबै जनता समाजवादी वा राजपाकै पक्षमा त छैन । त्यो दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्छ । मधेशीप्रति कम्युनिष्टको के धारणा छ, किन मधेशका अधिकारहरू दिन चाहिरहेका छैनन् भन्ने कुरा अब जनताले बुझिरहेका छन् । ओलीजीले समृद्ध राष्ट्र बनाउने जुन सपना देख्नुभएको छ त्यो मधेशबिना पूरा हुन सक्दैन । कम्युनिष्टहरूको मधेशप्रतिको दृष्टि अहिले पनि नकारात्मक छ भन्ने कुरालाई हामीले पनि जनताका बीच भनिरहेका छौं । संघीयता यिनीहरूको एजेन्डा होइन, त्यसलाई समाप्त गर्न खोजेका छन् ।
० तपाइँहरू सरकारमै बसेर सरकारको विरोध गर्नु हुन्छ । त्यसबाट पनि तपाइँहरूसँग प्रधानमन्त्री रिसाउनुभएको छ भन्ने चर्चा छ नि ?
— स्वाभाविकै हो नि । मधेशवादी पार्टीका कारण यो मुलुकमा संघीयता स्थापित भएको छ । मधेशवादी र माओवादीले गर्दा मुलुकमा आज गणतन्त्र स्थापना भएको छ । गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशिता मधेश आन्दोलनको देन हो । संघीयता त एमाले र कांग्रेसको एजेन्डामै थिएन त्यसैले यिनीहरू अहिले पनि आत्मादेखि संघीयतालाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा उनीहरूको मधेशप्रतिको दृष्टिकोण अझै पनि नकारात्मक छ । हामीले दुई तिहाई पु¥याएर पनि संविधान संशोधन गर्दैन भने जनताले यसको परिणाम भोली देखाउँछ । जनतालाई यसबारे प्रष्ट पार्नका लागि पनि हामी सरकारमा गएका छौं ।
० तपाइँहरू सरकारको आलोचना गरिरहँदा सरकारबाट बाहिर हटाउने चेतावनी प्रधानमन्त्रीले दिएको भन्ने चर्चा पनि छ ?
— नेकपाकै कतिपय नेताहरूले सरकारको कडा रूपमा आलोचना गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा आलोचनालाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन । नेकपाकै नेताहरू माधव नेपाल लगायतकाले यो सरकारको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाइरहेका छन् । हामी सरकारमा हुँदा पनि यदि यो सरकारको गतिविधि गलत छ भने सही बाटोमा ल्याउन हाम्रो भूमिका रहन्छ । हामीले जनतासमक्ष सरकारलाई सतर्क गराउँछौं । त्यसकारणले हामी गलत क्रियाकलापको विरोध गरेका छौं । जहाँसम्म सरकारले हामीलाई निकाल्ने कुरा छ, प्रधानमन्त्रीले सक्नुहुन्छ भनेर निकाले भइहाले नि । प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई आँट भने निकालोस् । त्यसपछि हामी के गर्छौं त्यो हामी सोच्छौं । ओलीजीको घुर्कीले यो देश चल्दैन ।
० समाजवादी पार्टी यो सरकारको घटक दल हो, तर प्रदेश प्रमुखहरूको विषयमा जुन निर्णय भयो त्यसमा त तपाइँहरूलाई सोधिएन ?
— यस विषयमा समाजवादीसँग सरकराले कुनै छलफल गरेको छैन । यो सरकारले यस विषयमा निरंकुशताको पराकाष्ठा नाघेको छ । यस विषयमा सत्ता दलसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो । यो सरकारले त राजारजौटाभन्दा पनि निरंकुशरूपमा प्रस्तुत भयो ।
० भनेपछि सरकारले गर्ने निर्णयहरूबारे सत्तारूढ समाजवादीसँग छलफल हुँदैन ?
— यो सरकारले सत्तापक्ष मात्रै होइन, पक्ष र प्रतिपक्षसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ । सदनभित्र पक्ष र प्रतिपक्षको पनि भूमिका हुन्छ । प्रतिपक्षबिना सदन चल्दैन । तर, यो सरकारले एकै पटक १०–१५ वटा विधेयक ल्याउने र बहुमतको अहंकारले पारित गर्दै गएको छ । यसमा प्रतिपक्षको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएन । बहुमतको दम्भले मुलुक नै हाम्रै मुठ्ठिमा छ भन्ने सोच देखिएको छ । यसको विरोधमा हामीले सदनमा गरिरहेका छौं । तर, हाम्रो कुरालाई यिनीहरूले सुनिरहेको छैन ।
० समाजवादी पार्टी मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा गएको हो । सरकारले यस्ता निर्णय वा विधेयक ल्याउँदा तपाइँहरू त्यसको जिम्मेवारी लिने कि नलिने ?
— हामीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । विधेयकहरूमध्ये कतिपय राम्रा कुराहरू पनि आएका छन् । हामीले सरकारको राम्रो कामलाई समर्थन गरेका छौं । तर, नराम्रा कुराहरूको हामीले विरोध गरेका छौं । विधेयक ल्याउने वा निर्णयहरू गर्ने सरकारको शैली निरंकुशता जस्तै देखिएको छ ।
० समाजवादी र राजपाबीच एकताको कुरा कहाँसम्म पुग्यो ?
— हामी एकताको धेरै नजिक पुगिसकेका छौं । एकताको विकल्प छैन भनेर दुवै पार्टीले महसुस गरिसकेको छ । किनभने यो मुलुकलाई निकास दिनका लागि अब वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ । सबैले आआफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन । राजपामा ६ जनाको अध्यक्षमण्डल भएकाले केही कुरा मिलाउन बाँकी छ । समाजवादीमा पनि केही कुराहरू मिलाउँदैछौं । एकताको यो महाअभियान पूरा गर्नका लागि हामीले गृहकार्य गर्नैपर्छ । मंसिर पहिलो सातासम्म एकताका धेरै कुराहरूमा टुंगो लागिसक्छ ।
० समाजवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने राजपाको शर्त छ नि ?
— राजपाका शर्तहरू आफ्नो ठाउँमा छ । हाम्रो पार्टी एक भइसकेपछि पार्टीले यस विषयमा निर्णय गर्ने हो । एताबाट हट्नुस्, छतबाट कुद्नुस् त्यसपछि यो गर्छौं भन्ने हुँदैन । पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि सबै मिलेर निर्णय गर्ने हो नि । पहिले त कुराहरू मिल्नुप¥यो । पहिले कुरा नमिल्ने तर यता बस, उता बस भन्ने कुरा हुँदैन । पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त मिल्नुपर्छ । यी कुराहरू मिल्यो भने सरकारमा बस्ने÷नबस्ने शर्तको औचित्य छैन ।
० एकताको टुंगो लागिसकेपछि घोषणाभन्दा पहिले सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना छ कि छैन ?
— यस विषयमा छलफल भएको छैन । पार्टी एक भइसकेपछि सबै जना पार्टीभित्रै बसेर छलफल गर्छौं । त्यसपछि पार्टीले निर्णय गरेको कुरा सबैले मान्नुपर्छ ।
० भनेपछि, एकतापछि मात्रै सरकारबारे निर्णय हुन्छ ?
— हो । हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ । त्यो बैठकमा पनि एकताका बारे धेरै कुरामा छलफल हुन्छ ।
० भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालका केही भूभाग उता परेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, यसमा समाजवादीको धारणा के छ ?
— नेपालको परराष्ट्र नीति नै खुकुलो छ । यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो भूभागबारे व्यापक छलफल गर्नुपर्ने थियो । नेपालको सिमाना कहाँसम्म छ र कहाँ कति मिचिएको छ । भारतको नक्सामा यदि नेपाली भूभाग परेको छ भने सरकारस्तरबाट नै छलफल हुनुपर्छ । किनभने नेपालको भूभाग कुनै पनि छिमेकी मुलुकले लिनु हुँदैन ।
० भनेपछि सरकार नै अहिलेसम्म स्पष्ट छैन ?
— छैन । आफ्नो सिमानाबारे कुनै किसिमको गृहकार्य देखिएको छैन । आफ्नो मुलुकप्रतिको गम्भीरता देखिएको छैन । यस्तो गम्भीर विषयहरूमा जसरी दुवै मुलुकका उच्चस्तरीयरूपमा बैठक गरी टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । त्यसपछि सरकारको चासो छैन ।